Yangon News - Page 354 of 364 - Reliable online media and news website
သူမရေးထားတဲ့အထဲမှာ “ငါ့ဘက်က ဘာမှားတာရှိလို့လဲလို့ သူ့ကို ကျွန်မ မေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သူက ကျွန်မက Sexy မကျဘူး၊ ကျွန်မရဲ့ သားမြတ်(ချိုသီး)ကလည်း Sexy မကျဘူး ဒါကြောင့် ကွာရှင်းချင်နေပြီလို့ ပြောပါတယ်” လို့ ပါဝင်လာတာပါ။
သူမရေးထားတဲ့အထဲမှာ “ငါ့ဘကျက ဘာမှားတာရှိလို့လဲလို့ သူ့ကို ကြှနျမ မေးခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ သူက ကြှနျမက Sexy မကဘြူး၊ ကြှနျမရဲ့ သားမွတျ(ခြိုသီး)ကလညျး Sexy မကဘြူး ဒါကွောငျ့ ကှာရှငျးခငျြနပွေီလို့ ပွောပါတယျ” လို့ ပါဝငျလာတာပါ။
ရုပ်ဆိုးလေးတွေဘဝမှ နတ်သမီးလေးတွေလိုချောမောလာကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီမမများ
အခုကျနော်တို့ တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးထဲက အမျိုးသမီးတွေကတော့ ကမ္ဘာပေါ်က အမျိုးသမီးထုကြီးသန်းနဲ့ချီပြီးအားကျနေရတဲ့ သူတွေပါ ။ ကျနော်တို့ မြန်မာ ဆိုရိုးစကားမှာတော့ ကျီးမှလရင်ဒေါင်းမျိုးဆိုတဲ့ စကားလေးလည်းရှိတာကြောင့် သူ့ကို ကျနော်တို့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ဒေါင်းမအလှလေးတွေလို့ တင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ မှားမယ်မထင်ပါဘူး ။ သူတို့တွေရဲ့ ငယ်ဘဝ အမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့ အခုလက်ရှိ ပုံတွေနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တေ့ာ တကယ်ကို ဘဲရုပ်ဆိုးမလေးတွေ ဘဝကနေ ချောမောလှပတဲ့ နတ်သမီးလေးတွေအသွင်ကို ပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေမြင်နိုင်မှာပါ ။ သူတို့ရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်တွေကို ကြည့် မယ်ဆိုရင် တကယ်ကို တခြားသူတစ်ယောက် အဖြစ် ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသလားဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိပါတယ် ။ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုတော့ ဖတ်ရှုအားပေးကြပါဦး ။
လူတော်တော်များများကတော့ သူ့ကို DCEU ရဲ့ Sucide Squad ထဲက စူပါဗီလိန် တစ်ယောက်အဖြစ် မှတ်မိနေကြဦးမယ်ထင်ပါတယ် ။ သူကတာ့ မင်းသားကြီး လီယိုနာဒိုနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လည်း The Wolf Of Wall Street ဇာတ်ကြီးမှာရော The Legend of Tarzan ဇာတ်ကာကြီးမှာရော ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖူးသူတစ်ယောက်ပါ ။ သူကတော့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မွေးဖွားတဲ့ သြစတေးလျန်းလူမျိုး သရုပ်ဆောင်သရုပ် ဖြစ်ပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက Time မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့လွှမ်းမိုးနိုင်သူအယောက် ၁၀၀ စာရင်းထဲမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ ငယ်ဘဝလေးကလည်း ဘဲရုပ်ဆိုးလေးတစ်ယောက်ပါပဲ ။
အခုဒီစာရင်းထဲမှာ နောက်ထက် ပါဝင်လာတဲ့ သူတစ်ယောက်ကလည်း ကျနော်တို့ အချစ်တော်ကြီး Christopher Nolan ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Batman trilogy ထဲက နောက်ဆုံးကားဖြစ်တဲ့ The Dark Knight Rise မှာလည်း Catwoman အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာ အသက် ၃၆ နှစ်တောင်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက် ရဲ့မိခင်ဖြစ်ပေမယ့်လို့ အခုထက်ထိ ချောမောလှပတဲ့ မင်းသမီးစာရင်းထဲမှာ နေရာယူထားနိုင်တုန်းပါပဲ ။ သူရဲ့ ငယ်ဘဝကလည်း ဘဲရုပ်ဆိုးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ ဖူးပါတယ် ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
အချစ်ခန်း အကြမ်းကြီးတွေနဲ့ စိတ်ဆာလောင်မှု အသားပေးရိုက်ကူးထားတဲ့ 50 Shades of Gray မှာ ခပ်အေးအေးကောင်မလေးတစ်ယောက် အဖြစ် စွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတော့ အားလုံး မေ့ပစ်ဖို့ခက်ခဲနေကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ သူရဲ့ ငယ်ဘဝ ရုပ်ကလေးက လည်း တကယ့် ဘဲရုပ်ဆိုးမလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် သင်ရုပ်ဆိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး ပိုက်ဆံမရှိသေးလို့ပါဆိုတဲ့ စကားအစား သင်ရုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူး အရွယ် မရောက်သေးလို့ပါဆိုပြီးတော့တောင် ပြောင်းလဲ ပြောဆိုရမလိုဖြစ်နေပြီ။
ချာလီ၏နတ်မိမယ်လေးများလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Charlie’s Angels ဇာတ်လမ်းကို ၉၀ခုနှစ်ဖွားတွေ တော်တော်များများ အသည်းစွဲကြည့်ကြဖူးမှာပါ။အဲ့ဒီထဲက ညှို့အားပြင်းတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီး ငယ်ငယ်လေးကတည်း ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝ နဲ့ သရုပ်ဆောင်လောက ထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သူကတော့ Drew Barrymore ပါ ။ သူရဲ့ အသက်ကတော့ အခုဆိုရင် ၄၄နှစ် ရှိသွားပြီး ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ တွေ့မြင်ရနည်းသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ချောမောလှပလှတဲ့ နတ်သမီးလေး တစ်ပါးလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုကိုတို့ရဲ့ အိမ်မက်နတ်သမီး ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Drew Barrymore ကိုယ်တိုင်ကလည်း တစ်ချိန်ကတော့ ဘဲရုပ်ဆိုးလေးပါပဲတဲ့ ။
သီချင်းတွေကို အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ နားထောင်သူရင်ထဲ စူးနင့်ဝင်ရောက်သွားအောင် သီဆိုနိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအဆိုတော် Adele ကိုတော့ အားလုံးသော ဂီတကိုချစ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူကတော့ ဂီတနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပါရမီထူးထူးခြားခြားပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့တောင်ဆိုရပါမယ် ။ သူကတော့ ဂီတနဲ့ ပတ်သက်ရင် အမြင့်ဆုံးဆုတစ်ဆုလို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ ဂရမ်မီဆုကိုလည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ဆွတ်ခူးရယူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်မယ့် အမျိုးတစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ့် Adele ကိုယ်တိုင်လည်း ငယ်စဉ်အချိန်အခါတုန်းကတော့ ဘဲရုပ်ဆိုးမလေးပါပဲ ။
အခုကနြျောတို့ တငျဆကျပေးမယျ့အကွောငျးအရာလေးထဲက အမြိုးသမီးတှကေတော့ ကမ်ဘာပျေါက အမြိုးသမီးထုကွီးသနျးနဲ့ခြီပွီးအားကနြရေတဲ့ သူတှပေါ ။ ကနြျောတို့ မွနျမာ ဆိုရိုးစကားမှာတော့ ကြီးမှလရငျဒေါငျးမြိုးဆိုတဲ့ စကားလေးလညျးရှိတာကွောငျ့ သူ့ကို ကနြျောတို့ ကမ်ဘာကြျောတဲ့ ဒေါငျးမအလှလေးတှလေို့ တငျစားမယျဆိုရငျတော့ မှားမယျမထငျပါဘူး ။ သူတို့တှရေဲ့ ငယျဘဝ အမှတျတရပုံလေးတှနေဲ့ အခုလကျရှိ ပုံတှနှေိုငျးယှဉျကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျတေ့ာ တကယျကို ဘဲရုပျဆိုးမလေးတှေ ဘဝကနေ ခြောမောလှပတဲ့ နတျသမီးလေးတှအေသှငျကို ပွောငျးလာခဲ့ကွတယျဆိုတာကို မကျြဝါးထငျထငျ တှမွေငျနိုငျမှာပါ ။ သူတို့ရဲ့ ပွောငျးလဲလာတဲ့ ရုပျရညျသှငျပွငျတှကေို ကွညျ့ မယျဆိုရငျ တကယျကို တခွားသူတဈယောကျ အဖွဈ ကွီးပွငျးလာခဲ့ကွသလားဆိုပွီး မေးခှနျးထုတျစရာတှရှေိပါတယျ ။ ဘယျသူတှလေဲဆိုတာကိုတော့ ဖတျရှုအားပေးကွပါဦး ။
လူတျောတျောမြားမြားကတော့ သူ့ကို DCEU ရဲ့ Sucide Squad ထဲက စူပါဗီလိနျ တဈယောကျအဖွဈ မှတျမိနကွေဦးမယျထငျပါတယျ ။ သူကတာ့ မငျးသားကွီး လီယိုနာဒိုနဲ့တှဲဖကျပွီးတော့လညျး The Wolf Of Wall Street ဇာတျကွီးမှာရော The Legend of Tarzan ဇာတျကာကွီးမှာရော ပါဝငျသရုပျဆောငျဖူးသူတဈယောကျပါ ။ သူကတော့ ၁၉၉၀ ပွညျ့နှဈမှေးဖှားတဲ့ သွစတေးလနျြးလူမြိုး သရုပျဆောငျသရုပျ ဖွဈပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈတုနျးက Time မဂ်ဂဇငျးရဲ့ ကမ်ဘာ့လှမျးမိုးနိုငျသူအယောကျ ၁၀၀ စာရငျးထဲမှာလညျး ပါဝငျခဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့ ငယျဘဝလေးကလညျး ဘဲရုပျဆိုးလေးတဈယောကျပါပဲ ။
အခုဒီစာရငျးထဲမှာ နောကျထကျ ပါဝငျလာတဲ့ သူတဈယောကျကလညျး ကနြျောတို့ အခဈြတျောကွီး Christopher Nolan ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ Batman trilogy ထဲက နောကျဆုံးကားဖွဈတဲ့ The Dark Knight Rise မှာလညျး Catwoman အဖွဈပါဝငျသရုပျထားသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ၁၉၈၂ ခုနှဈမှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး အခုခြိနျမှာ အသကျ ၃၆ နှဈတောငျရှိပွီးဖွဈပါတယျ။ ကလေးတဈယောကျ ရဲ့မိခငျဖွဈပမေယျ့လို့ အခုထကျထိ ခြောမောလှပတဲ့ မငျးသမီးစာရငျးထဲမှာ နရောယူထားနိုငျတုနျးပါပဲ ။ သူရဲ့ ငယျဘဝကလညျး ဘဲရုပျဆိုးလေးတဈယောကျဖွဈခဲ့ ဖူးပါတယျ ဆိုတာကိုဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
အခဈြခနျး အကွမျးကွီးတှနေဲ့ စိတျဆာလောငျမှု အသားပေးရိုကျကူးထားတဲ့ 50 Shades of Gray မှာ ခပျအေးအေးကောငျမလေးတဈယောကျ အဖွဈ စှဲဆောငျမှုအပွညျ့နဲ့ သရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ခဈြစရာကောငျမလေးတဈယောကျကိုတော့ အားလုံး မပေ့ဈဖို့ခကျခဲနကွေဦးမယျထငျပါတယျ။ သူရဲ့ ငယျဘဝ ရုပျကလေးက လညျး တကယျ့ ဘဲရုပျဆိုးမလေးတဈယောကျ ဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။ တကယျဆိုရငျ သငျရုပျဆိုးတာ မဟုတျပါဘူး ပိုကျဆံမရှိသေးလို့ပါဆိုတဲ့ စကားအစား သငျရုပျဆိုးတာမဟုတျပါဘူး အရှယျ မရောကျသေးလို့ပါဆိုပွီးတော့တောငျ ပွောငျးလဲ ပွောဆိုရမလိုဖွဈနပွေီ။
ခြာလီ၏နတျမိမယျလေးမြားလို့ အဓိပ်ပါယျရတဲ့ Charlie’s Angels ဇာတျလမျးကို ၉၀ခုနှဈဖှားတှေ တျောတျောမြားမြား အသညျးစှဲကွညျ့ကွဖူးမှာပါ။အဲ့ဒီထဲက ညှို့အားပွငျးတဲ့ မငျးသမီးတဈယောကျလညျးဖွဈပွီး ငယျငယျလေးကတညျး ကလေးသရုပျဆောငျဘဝ နဲ့ သရုပျဆောငျလောက ထဲကို စတငျဝငျရောကျခဲ့သူကတော့ Drew Barrymore ပါ ။ သူရဲ့ အသကျကတော့ အခုဆိုရငျ ၄၄နှဈ ရှိသှားပွီး ဖနျသားပွငျပျေါမှာ တှမွေ့ငျရနညျးသှားပွီးဖွဈပါတယျ။ ခြောမောလှပလှတဲ့ နတျသမီးလေး တဈပါးလညျးဖွဈခဲ့ပွီး ကိုကိုတို့ရဲ့ အိမျမကျနတျသမီး ဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ Drew Barrymore ကိုယျတိုငျကလညျး တဈခြိနျကတော့ ဘဲရုပျဆိုးလေးပါပဲတဲ့ ။
သီခငျြးတှကေို အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့ နားထောငျသူရငျထဲ စူးနငျ့ဝငျရောကျသှားအောငျ သီဆိုနိုငျတဲ့ အင်ျဂလိပျလူမြိုးအဆိုတျော Adele ကိုတော့ အားလုံးသော ဂီတကိုခဈြတဲ့ မိတျဆှတှေေ သိကွမယျထငျပါတယျ။ သူကတော့ ဂီတနဲ့ ပတျသကျရငျ ပါရမီထူးထူးခွားခွားပါသူတဈယောကျဖွဈတယျလို့တောငျဆိုရပါမယျ ။ သူကတော့ ဂီတနဲ့ ပတျသကျရငျ အမွငျ့ဆုံးဆုတဈဆုလို့ သတျမှတျလို့ရတဲ့ ဂရမျမီဆုကိုလညျး ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာ ဆှတျခူးရယူနိုငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ ။ အဲ့ဒီလိုအောငျမွငျမှုတှရေယူနိုငျမယျ့ အမြိုးတဈယောကျ ဖွဈလာမယျ့ Adele ကိုယျတိုငျလညျး ငယျစဉျအခြိနျအခါတုနျးကတော့ ဘဲရုပျဆိုးမလေးပါပဲ ။
ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီလို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ Emma Watson နဲ့ Tom Felton
နောက်ဆုံးတော့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက်ကြိတ်ပြီးမျှော်လင့်လာကြတဲ့ Potterhead တွေရဲ့ အိပ်မက်ကြီးက တကယ်ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ Harry Potter ဇာတ်ကားတွေကို မလွတ်တမ်းစွဲစွဲမြဲမြဲကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ Harry Potter Fans တွေဟာ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဘုရင်မတစ်ပါးလိုတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့လှသွေးကြွယ်လာခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလေး Emma Watson ကို အတူတူလက်တွဲသရုပ်ဆောင်တဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Deniel Redcliffe နဲ့ Ron Wesley နေရာမှာသရုပ်ဆောင်တဲ့မင်းသား Rupert Grint နှစ်ဦးထဲက တစ်ဦးဦးနဲ့ အချိန်တန်ရင်အပြင်မှာပါချစ်ကြိုက်သွားမှာပဲလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Emma ဟာ မင်းသားနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ အချစ်ကိုခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း သူက တစ်ယောက်ကိုမှပြန်မချစ်ခဲ့ပါဘူး။ Harry Potter မင်းသား Daniel Redcliffe က Emma ကို ညီမလေးအရင်းတစ်ယောက်လိုပဲသဘောထားပါတယ်လို့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေခဲ့ပြီး Rupert Grint ကတော့ Emma ကို တိတ်တိတ်လေးကြိတ်ပြီးချစ်နေခဲ့ရတာပါလို့ရင်ဖွင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
စိတ်ထားလည်းကောင်း၊ကြင်နာတတ်ပြီးချောမောတဲ့ မင်းသားနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အချစ်ကိုခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း Emma ကတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ရိုးသားကြိုးစားတဲ့လူငယ်လေးတွေထက် တစ်လောကလုံးကိုဂရုမစိုက်သလိုပုံဖမ်ြး့ပီး အကြည့်တစ်ချက်ထဲနဲ့ ရင်ခုန်သံတွေဝုန်းဒိုင်းကြဲအောင်ပြုစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လူချောလူမိုက်လေးကိုမှ ကြွေကျခဲ့သူပါ။ Emma ကြွေကျခဲ့ရတဲ့ တစ်ဖက်သတ်ကြိတ်ပြီး crush ခဲ့ရတဲ့လူချောလေးကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Villain လူဆိုးလေးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Draco Malfoy ဆိုတဲ့ကာရိုက်တာကိုသရုပ်ဆောင်တဲ့ ရက်ရက်စက်စက်ချောတဲ့ကောင်လေး Tom Felton ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူဆိုးဘက်ကပါဝင်တယ်ဆိုပေမယ့် ပင်လယ်လိုပြာလဲ့တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မေးရိုးနဲ့ ပြုံးလိုက်ရင် အသည်းတွေကြွေကျသွားရအောင်ပြုစားနိုင်စွမ်းတဲ့ Draco Malfoy ဟာ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတွေရဲ့နှလုံးသားကိုအပိုင်သိမ်းထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ Draco အပိုင်သိမ်းထားနိုင်တဲ့ နှလုံးသားတွေထဲမှာ ရွှေမင်းသမီး Emma Watson ကလည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Emma Watson က Talk Show တစ်ခုမှာ သူမ ငယ်စဉ်ကတည်းက Draco အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Tom Felton ကို စွဲစွဲလန်းလန်းရူးရူးမူးမူးကို တစ်ဖက်သတ်ချစ်ခဲ့ရကြောင်းဖွင့်ဟထားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်မတို့အတူတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ဆယ်နှစ်လုံးလုံး Daniel ရယ် Rupert ရယ်နဲ့က တကယ့်ကိုသူငယ်ချင်းစစ်စစ်တွေအဖြစ်ပဲရှိခဲ့တာပါ။ဘယ်သူနဲ့မှ ဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Draco… Draco ကိုကျတော့။ ကျွန်မ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ဆယ့်နှစ်နှစ် ဆယ်သုံးနှစ်လောက်ကတည်းက Tom Felton ကို အရူးအမူးကိုကြွေခဲ့တာပါ။ သူက အသက်လည်းနည်းနည်းပိုကြီးတယ်။ ကိုကြီးပေါ့။ ပြီးတော့ သူ့မှာ စကိတ်ဘုတ်တစ်ခုလည်းရှိတယ်။ အဲဒီစကိတ်ဘုတ်လေးနဲ့ လျှောက်သွားနေပြီး စကိတ်ကို twist တွေလုပ်နေတာ။ သူကအရမ်းကိုမိုက်တာ။ ကျွန်မကြွေနေတာလည်းသူသိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူက ကျွန်မကို ညီမလေးတစ်ယောက်လိုပဲမြင်တယ်လို့ အမြဲပြောခဲ့တယ်။အဲဒါက ကျွန်မကိုတကယ်အသည်းကွဲစေခဲ့တာပေါ့။အခုထိလည်းအသည်းကွဲတုန်းပဲ”လို့ ရယ်မောပြီးရင်ဖွင့်ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ Emma ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အိပ်မက်တွေက ပြည့်ဝခဲ့ပြီလို့ဆိုရမလားပါပဲ။ မကြာသေးမီက Instagram မှာ Tom က Emma ကို ဂစ်တာဘယ်လိုတီးရမလဲ သင်ပေးနေတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကို “အတတ်မြန်တဲ့ကောင်မလေး”ဆိုတဲ့ caption လေးနဲ့ တင်ထားခဲ့ပြီး Emma ကလည်း သူမရဲ့ Instagram မှာ Tom နဲ့အတူ ကမ်းခြေကိုအပန်းဖြေခရီးထွက်နေပြီး Tom က ကမ်းခြေမှာထိုင်ရင်းပျော်မြူးနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ Harry Potter ပရိသတ်တွေကတော့ Harmione နဲ့ လူဆိုးလေး Draco ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုအရမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပြီး တခဲနက်သဘောတူအားပေးနေကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့်သူတုိ့နှစ်ဦးစလုံးက လက်ရှိမှာ ချစ်သူတွေဆိုတာကို အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ပရိသတ်ကြီးရော Tom နဲ့ Emma တို့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီထင်လား။ ဒါမှမဟုတ် Emma တစ်ယောက်အခုထိ ညီမလေးဇုန်အတွင်းက မကျော်နိုင်သေးဘူးလား။ ဘယ်လိုမြင်လဲပြောခဲ့ကြပါဦး။
ခစွသြူတှဖှစေနြပှေီလို့ သတငြးထှကနြတေဲ့ Emma Watson နဲ့ Tom Felton
နောကဆြုံးတော့ နှစပြေါငြးနှစဆြယလြောကကြှိတပြှီးမွှောလြငြ့လာကှတဲ့ Potterhead တှရေဲ့ အိပမြကကြှီးက တကယဖြှစလြာပှီလို့ဆိုရမှာပါ။ Harry Potter ဇာတကြားတှကေို မလှတတြမြးစှဲစှဲမှဲမှဲကှညြ့ခဲ့ကှတဲ့ Harry Potter Fans တှဟော ဇာတကြားတှထေဲမှာ ဘုရငမြတစပြါးလိုတစနြထေ့ကတြစနြလှေ့သှေးကှယလြာခဲ့တဲ့ မငြးသမီးလေး Emma Watson ကို အတူတူလကတြှဲသရုပဆြောငတြဲ့မငြးသားနှစယြောကဖြှစတြဲ့ Deniel Redcliffe နဲ့ Ron Wesley နရောမှာသရုပဆြောငတြဲ့မငြးသား Rupert Grint နှစြဦးထဲက တစြဦးဦးနဲ့ အခွိနတြနရြငအြပှငမြှာပါခစွကြှိုကသြှားမှာပဲလို့ထငခြဲ့ကှပါတယြ။ ဒါပမယြေ့ Emma ဟာ မငြးသားနှစယြောကစြလုံးရဲ့ အခစွကြိုခံခဲ့ရပမယြေ့လညြး သူက တစယြောကကြိုမှပှနမြခစွခြဲ့ပါဘူး။ Harry Potter မငြးသား Daniel Redcliffe က Emma ကို ညီမလေးအရငြးတစယြောကလြိုပဲသဘောထားပါတယလြို့အငတြာဗွူးတှမှောဖှခေဲ့ပှီး Rupert Grint ကတော့ Emma ကို တိတတြိတလြေးကှိတပြှီးခစွနြခေဲ့ရတာပါလို့ရငဖြှငြ့ခဲ့ဖူးပါတယြ။
စိတထြားလညြးကောငြး၊ကှငနြာတတပြှီးခွောမောတဲ့ မငြးသားနှစယြောကစြလုံးရဲ့အခစွကြိုခံခဲ့ရပမယြေ့လညြး Emma ကတော့ မိနြးကလေးတှရေဲ့ ထုံးစံအတိုငြး ရိုးသားကှိုးစားတဲ့လူငယလြေးတှထကြေ တစလြောကလုံးကိုဂရုမစိုကသြလိုပုံဖမြှး့ပီး အကှညြ့တစခြကွထြဲနဲ့ ရငခြုနသြံတှဝေုနြးဒိုငြးကှဲအောငပြှုစားနိုငစြှမြးရှိတဲ့ လူခွောလူမိုကလြေးကိုမှ ကှကခွေဲ့သူပါ။ Emma ကှကခွေဲ့ရတဲ့ တစဖြကသြတကြှိတပြှီး crush ခဲ့ရတဲ့လူခွောလေးကတော့ အားလုံးသိကှတဲ့အတိုငြး Villain လူဆိုးလေးအဖှစပြါဝငခြဲ့တဲ့ Draco Malfoy ဆိုတဲ့ကာရိုကတြာကိုသရုပဆြောငတြဲ့ ရကရြကစြကစြကခြွောတဲ့ကောငလြေး Tom Felton ပဲဖှစပြါတယြ။ လူဆိုးဘကကြပါဝငတြယဆြိုပမယြေ့ ပငလြယလြိုပှာလဲ့တဲ့မကွဝြနြးတှနေဲ့ ခိုငမြာတဲ့ပှီးဆှဲဆောငမြှုရှိတဲ့မေးရိုးနဲ့ ပှုံးလိုကရြငြ အသညြးတှကှကေသွှေားရအောငပြှုစားနိုငစြှမြးတဲ့ Draco Malfoy ဟာ ဆယကြွောသြကကြောငမြလေးတှရေဲ့နှလုံးသားကိုအပိုငသြိမြးထားနိုငခြဲ့တယဆြိုတာ ဘယသြူမှမငှငြးနိုငပြါဘူး။ Draco အပိုငသြိမြးထားနိုငြတြဲ့ နှလုံးသားတှထေဲမှာ ရှမငြေးသမီး Emma Watson ကလညြး တစယြောကအြပါအဝငဖြှစခြဲ့ပါတယြ။
Emma Watson က Talk Show တစခြုမှာ သူမ ငယစြဉကြတညြးက Draco အဖှစသြရုပဆြောငတြဲ့ Tom Felton ကို စှဲစှဲလနြးလနြးရူးရူးမူးမူးကို တစဖြကသြတခြစွခြဲ့ရကှောငြးဖှငြ့ဟထားခဲ့ပါတယြ။ “ကွှနမြတို့အတူတူသရုပဆြောငခြဲ့ကှတဲ့ ဆယနြှစလြုံးလုံး Daniel ရယြ Rupert ရယနြဲ့က တကယြ့ကိုသူငယခြငြွးစစစြစတြှအဖှေစပြဲရှိခဲ့တာပါ။ဘယသြူနဲ့မှ ဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမယြေ့ Draco… Draco ကိုကတွော့။ ကွှနမြ ဆယကြွောသြကအြရှယမြှာ ဆယြ့နှစနြှစြ ဆယသြုံးနှစလြောကကြတညြးက Tom Felton ကို အရူးအမူးကိုကှခေဲ့တာပါ။ သူက အသကလြညြးနညြးနညြးပိုကှီးတယြ။ ကိုကှီးပေါ့။ ပှီးတော့ သူ့မှာ စကိတဘြုတတြစခြုလညြးရှိတယြ။ အဲဒီစကိတဘြုတလြေးနဲ့ လွှောကသြှားနပှေီး စကိတကြို twist တှလေုပနြတော။ သူကအရမြးကိုမိုကတြာ။ ကွှနမြကှနတေောလညြးသူသိတယြ။ ဒါပမယြေ့သူက ကွှနမြကို ညီမလေးတစယြောကလြိုပဲမှငတြယလြို့ အမှဲပှောခဲ့တယြ။အဲဒါက ကွှနမြကိုတကယအြသညြးကှဲစခေဲ့တာပေါ့။အခုထိလညြးအသညြးကှဲတုနြးပဲ”လို့ ရယမြောပှီးရငဖြှငြ့ပှောကှားထားခဲ့ပါတယြ။
အခုတော့ Emma ရဲ့ ဆယကြွောသြကအြိပမြကတြှကေ ပှညြ့ဝခဲ့ပှီလို့ဆိုရမလားပါပဲ။ မကှာသေးမီက Instagram မှာ Tom က Emma ကို ဂစတြာဘယလြိုတီးရမလဲ သငပြေးနတေဲ့ ဓာတပြုံလေးကို “အတတမြှနတြဲ့ကောငမြလေး”ဆိုတဲ့ caption လေးနဲ့ တငထြားခဲ့ပှီး Emma ကလညြး သူမရဲ့ Instagram မှာ Tom နဲ့အတူ ကမြးခှကေိုအပနြးဖှခရေီးထှကနြပှေီး Tom က ကမြးခှမှောထိုငရြငြးပွောမြှူးနတေဲ့ဓာတပြုံကိုတငထြားခဲ့ပါတယြ။ Harry Potter ပရိသတတြှကတေော့ Harmione နဲ့ လူဆိုးလေး Draco ရဲ့ အခစွဇြာတလြမြးကိုအရမြးကိုစိတလြှုပရြှားနကှပှေီး တခဲနကသြဘောတူအားပေးနကှပေါပှီ။ ဒါပမယြေ့သူတို့နှစြဦးစလုံးက လကရြှိမှာ ခစွသြူတှဆေိုတာကို အတညပြှုထားခှငြးမရှိသေးပါဘူး။ ပရိသတကြှီးရော Tom နဲ့ Emma တို့ခစွသြူတှဖှစေနြကှပှေီထငလြား။ ဒါမှမဟုတြ Emma တစယြောကအြခုထိ ညီမလေးဇုနအြတှငြးက မကွောနြိုငြသြေးဘူးလား။ ဘယလြိုမှငလြဲပှောခဲ့ကှပါဦး။
ဘာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေထက်စာရင် အမျိုးသားတွေက ပိုကောင်းကြတာလဲ
လူသားတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာကတည်းက ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ ဆိုတာကတော့ ညီတူညီမျှဖြစ်ပေါ်လာပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း လူသားတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချိန်ကနေစလို အမျိုးသားတွေကတေ့ာ ပိုမိုကြိုးစားကြပြီး လောကကြီးမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေထက် နေရာပိုရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကတော့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ငြင်းခုံစရာကိစ္စ တခုပါ။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အမျိုးသားတွေကို ဘယ်လောက်ပဲ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်နိုင် အမျိုးသားတွေကို မမှီတဲ့အရာတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း တချို့သောအရာတွေမှာလည်း အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေကို မမီပြန်ပါဘူး။ အရာတော်တော်များများမှာတော့ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုအသုံးဝင်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ အမျိုးသားတွေ နေရာပိုရတာကလည်း ဟိုးရှေးယခင်တွေတုန်းက ပိုပြီးတော့တောင် များပါသေးတယ်။ ဒီဖက်ခေတ်ကြီးထဲမှာမှ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး လူ့အခွင့်အရေးတန်းတူရအောင် ကြိုးစားလာမှုတွေကြောင့်သာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတန်းတူ ဖြစ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အမျိုးသားတွေကတော့ အမျိုးသမီးတွေထက် စာရင် ပိုပြီးတော့ ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြဆဲပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ အမျိုးသမီးတွေထက် အမျိုးသားတွေက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို အရိုးရှင်းဆုံးသိနိုင်တဲအရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ယောကျာ်းလေးနဲ့ မိန်းကလေးယှဉ်လိုက်ရင်တော့ ယောကျာ်းလေးတွေက အမြဲတမ်းသန်မာစမြဲပါ။ ခန္ဓာကိုယ်တခုထဲ သန်မာတာ မဟုတ်ပဲ မိန်းကလေးတွေထက် စိတ်ရောကိုယ်ပါ သန်မာကြပါတယ်။ ဒါကလည်း အခြေခံအကျဆုံးထဲက ယောကျာ်းလေးတွေ မိန်းကလေးထက်ပိုကောင်းတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ယောကျာ်းလေးတွေကတော့ မိန်းကလေးတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်မှန်သမျှ လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ တချို့တွေမှာတော့ အခက်အခဲ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမယ့်လည်း အရာတော်တော်များများကိုတော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေကတော့ တခါတရံမှာ မျက်ရိတ်စက်လေးနဲ့ မျက်ရိတ်ရင်တောင် အတော်လေး ပင်ပန်းတတ်ကြပါတယ်။
ဒီဖက်ခေတ်ကြီးထဲမှာလည်း အိမ်သုံးလူသုံး စက်ပစ္စည်းတွေကို ပြင်နေကြတာကတော့ အမျိုးသားတွေများပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကတော့ သူတို့အတွက် ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းတွေ ပျက်ရင်တော့ ပြင်ဖို့က သိပ်မခက်ပါဘူး။ လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ ဒါကိုဘယ်လိုပြင် ရမလဲဆိုတာကို သူတို့အနေနဲ့ အလွယ်တကူသိကြပါတယ်။ ဒါကလည်း အမျိုးသမီးတွေထက် သာ တဲ့အချက်တခုပါပဲ။ ဒီလိုမျိုး စက်ပစ္စည်းတခုခုကို ပြင်ဖို့အတွက် နားလည် သဘောပေါက် လွယ်တာကလည်း အမျိုးသားတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇတခု ဖြစ်ပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ မရှိခြင်း
ဟုတ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းတော်တော်များများကတော့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးကြပြီး သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကြားမှာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ မရှိကြပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့် နည်းကြပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးတွေအနေနဲ့ အားလပ်ရက်မျိုးမှာ သူငယ်ချင်းတွေ စု ပြီး သောက်စားမယ်။ စကားလေးတွေ ပြောကြမယ်။ အရမ်းကို စိတ်ထဲမှာ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ တွေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မိန်းကလေးတွေကျတော့ ဒီလိုမျိုး အမြဲဖြစ်မနေကြပါဘူး။ လူချင်းသာနီးပေမယ့်လည်း စိတ်ချင်းမနီးကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဒါကလည်း အမျိုးသားတွေ အမျိုးသမီးတွေထက် သာရတဲ့ အချက်တချက် ဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်သွားမယ့်အခါ အချိန်နည်းနည်းပဲ ပေးရခြင်း
ဒါကလည်း ယောကျာ်းလေးတွေအနေနဲ့ မိန်းကလေးတွေထက် များစွာသာထက် အချက်ပါပဲ။ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ အပြင်သွားတဲ့အချိန်မှာ မိတ်ကပ်လိမ်းစရာမလိုပါဘူး။ ဆံပင်အတွက်များစွာ အချိန်မပေးရပါဘူး။ အထူးသဖြင့်တော့ အဝတ်အစားဝတ်တဲ့အချိန်မှာ ရွေးချယ်စရာတွေများမနေတာကလည်း အချိန်ကို တော်တော်သက်သာစေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အပြင်သွားဖို့ အနည်းဆုံး နာရီဝက်လောက်ကြာတတ်ပေမယ့်လည်း အမျိုးသားတွေကတော့ အများဆုံးမှ ၁၅ မိနစ်လောက်သာကြာကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီအချက်လေးကတော့ အမျိုးသမီးတွေထက်စာရင် အမျိုးသားတွေသာနေရတဲ့ အကြောင်းရင်း တခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးလေး ရဖို့အတွက် လွယ်ကူခြင်း
အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ လောကကြီးထဲကို သူ့တုိ့ရဲ့ မျိုးဆက် ပူတူးတူးလေးတွေ လောကကြီးထဲရောက်လာဖို့ ပြုလုပ်ချိန်ဟာ ၃ မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်။ ဒါပြီးရင်တော့ ကလေးပြုလုပ်တဲ့ သူတို့လုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးဆုံးပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း အမျိုးသမီးတွေကတော့ ကလေးလေးရဖို့အတွက် ၉ လ လောက် ဒုက္ခခံရပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကလေးလေးက လောကထဲကို ရောက်လာတာပါ။ ဒီကိစ္စကြီးမှာ အမျိုးသားတွေကတော့ အမျိုးသမီးတွေထက် အပြတ်အသက်ကို သာလွန်နေတာပါ။
ဘာကွောငျ့အမြိုးသမီးတှထေကျစာရငျ အမြိုးသားတှကေ ပိုကောငျးကွတာလဲ
လူသားတှေ စတငျဖွဈပျေါလာကတညျးက ယောကျြားနဲ့ မိနျးမ ဆိုတာကတော့ ညီတူညီမြှဖွဈပျေါလာပွီးသားပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး လူသားတှေ စတငျဖွဈပျေါလာတဲ့ အခြိနျကနစေလို အမြိုးသားတှကေတေ့ာ ပိုမိုကွိုးစားကွပွီး လောကကွီးမှာလညျး အမြိုးသမီးတှထေကျ နရောပိုရခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါကတော့ အမြိုးသမီးတှအေတှကျ ငွငျးခုံစရာကိစ်စ တခုပါ။ အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ အမြိုးသားတှကေို ဘယျလောကျပဲ ရငျဘောငျတနျးနိုငျနိုငျ အမြိုးသားတှကေို မမှီတဲ့အရာတှေ အမြားကွီးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့လညျး တခြို့သောအရာတှမှောလညျး အမြိုးသားတှကေ အမြိုးသမီးတှကေို မမီပွနျပါဘူး။ အရာတျောတျောမြားမြားမှာတော့ အမြိုးသားတှဟော အမြိုးသမီးတှထေကျ ပိုအသုံးဝငျတာတော့ အမှနျပါပဲ။ အမြိုးသားတှေ နရောပိုရတာကလညျး ဟိုးရှေးယခငျတှတေုနျးက ပိုပွီးတော့တောငျ မြားပါသေးတယျ။ ဒီဖကျခတျေကွီးထဲမှာမှ အမြိုးသားနဲ့ အမြိုးသမီး လူ့အခှငျ့အရေးတနျးတူရအောငျ ကွိုးစားလာမှုတှကွေောငျ့သာ အမြိုးသားနဲ့ အမြိုးသမီးတနျးတူ ဖွဈလာတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အမြိုးသားတှကေတော့ အမြိုးသမီးတှထေကျ စာရငျ ပိုပွီးတော့ ကွိုးစားရုနျးကနျနကွေဆဲပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဖျောပွပေးခငျြတာကတော့ အမြိုးသမီးတှထေကျ အမြိုးသားတှကေ ပိုကောငျးတယျဆိုတာကို အရိုးရှငျးဆုံးသိနိုငျတဲအရာလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ယောကျြားလေးတှဟော မိနျးကလေးတှထေကျ သနျမာကွတယျ
ယောကျြားလေးနဲ့ မိနျးကလေးယှဉျလိုကျရငျတော့ ယောကျြားလေးတှကေ အမွဲတမျးသနျမာစမွဲပါ။ ခန်ဓာကိုယျတခုထဲ သနျမာတာ မဟုတျပဲ မိနျးကလေးတှထေကျ စိတျရောကိုယျပါ သနျမာကွပါတယျ။ ဒါကလညျး အခွခေံအကဆြုံးထဲက ယောကျြားလေးတှေ မိနျးကလေးထကျပိုကောငျးတဲ့ အခကျြပါပဲ။ ယောကျြားလေးတှကေတော့ မိနျးကလေးတှေ မလုပျနိုငျတဲ့ အလုပျမှနျသမြှ လုပျနိုငျကွပါတယျ။ တခြို့တှမှောတော့ အခကျအခဲ ရှိကောငျးရှိနိုငျပမေယျ့လညျး အရာတျောတျောမြားမြားကိုတော့ လုပျနိုငျပါတယျ။ မိနျးကလေးတှကေတော့ တခါတရံမှာ မကျြရိတျစကျလေးနဲ့ မကျြရိတျရငျတောငျ အတျောလေး ပငျပနျးတတျကွပါတယျ။
ဒီဖကျခတျေကွီးထဲမှာလညျး အိမျသုံးလူသုံး စကျပစ်စညျးတှကေို ပွငျနကွေတာကတော့ အမြိုးသားတှမြေားပါတယျ။ အမြိုးသားတှကေတော့ သူတို့အတှကျ ပစ်စညျးအသဈအဆနျးတှေ ပကျြရငျတော့ ပွငျဖို့က သိပျမခကျပါဘူး။ လမျးညှနျခကျြတှနေဲ့ ဒါကိုဘယျလိုပွငျ ရမလဲဆိုတာကို သူတို့အနနေဲ့ အလှယျတကူသိကွပါတယျ။ ဒါကလညျး အမြိုးသမီးတှထေကျ သာ တဲ့အခကျြတခုပါပဲ။ ဒီလိုမြိုး စကျပစ်စညျးတခုခုကို ပွငျဖို့အတှကျ နားလညျ သဘောပေါကျ လှယျတာကလညျး အမြိုးသားတှရေဲ့ ပငျကိုယျဗီဇတခု ဖွဈပါတယျ။
ရှုပျထှေးတဲ့ ဆကျဆံရေးတှေ မရှိခွငျး
ဟုတျပါတယျ။ ယောကျြားတျောတျောမြားမြားကတော့ လှတျလပျပေါ့ပါးကွပွီး သူငယျခငျြး မိတျဆှတှေကွေားမှာ ရှုပျထှေးတဲ့ ဆကျဆံရေးတှေ မရှိကွပါဘူး။ တနညျးအားဖွငျ့ နညျးကွပါတယျ။ ယောကျြားလေးတှအေနနေဲ့ အားလပျရကျမြိုးမှာ သူငယျခငျြးတှေ စု ပွီး သောကျစားမယျ။ စကားလေးတှေ ပွောကွမယျ။ အရမျးကို စိတျထဲမှာ လှတျလပျပေါ့ပါးစှာ တှေးတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး မိနျးကလေးတှကေတြော့ ဒီလိုမြိုး အမွဲဖွဈမနကွေပါဘူး။ လူခငျြးသာနီးပမေယျ့လညျး စိတျခငျြးမနီးကွတဲ့သူတှေ အမြားကွီးပါပဲ။ ဒါကလညျး အမြိုးသားတှေ အမြိုးသမီးတှထေကျ သာရတဲ့ အခကျြတခကျြ ဖွဈပါတယျ။
အပွငျသှားမယျ့အခါ အခြိနျနညျးနညျးပဲ ပေးရခွငျး
ဒါကလညျး ယောကျြားလေးတှအေနနေဲ့ မိနျးကလေးတှထေကျ မြားစှာသာထကျ အခကျြပါပဲ။ အမြိုးသားတှအေနနေဲ့ အပွငျသှားတဲ့အခြိနျမှာ မိတျကပျလိမျးစရာမလိုပါဘူး။ ဆံပငျအတှကျမြားစှာ အခြိနျမပေးရပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့တော့ အဝတျအစားဝတျတဲ့အခြိနျမှာ ရှေးခယျြစရာတှမြေားမနတောကလညျး အခြိနျကို တျောတျောသကျသာစပေါတယျ။ အမြိုးသမီးတှေ အပွငျသှားဖို့ အနညျးဆုံး နာရီဝကျလောကျကွာတတျပမေယျ့လညျး အမြိုးသားတှကေတော့ အမြားဆုံးမှ ၁၅ မိနဈလောကျသာကွာကွမယျ ထငျပါတယျ။ ဒီအခကျြလေးကတော့ အမြိုးသမီးတှထေကျစာရငျ အမြိုးသားတှသောနရေတဲ့ အကွောငျးရငျး တခုလညျး ဖွဈပါတယျ။
ကလေးလေး ရဖို့အတှကျ လှယျကူခွငျး
အမြိုးသားတှအေနနေဲ့ လောကကွီးထဲကို သူ့တို့ရဲ့ မြိုးဆကျ ပူတူးတူးလေးတှေ လောကကွီးထဲရောကျလာဖို့ ပွုလုပျခြိနျဟာ ၃ မိနဈလောကျပဲကွာပါတယျ။ ဒါပွီးရငျတော့ ကလေးပွုလုပျတဲ့ သူတို့လုပျငနျးတာဝနျပွီးဆုံးပါပွီ။ ဒါပမေယျ့လညျး အမြိုးသမီးတှကေတော့ ကလေးလေးရဖို့အတှကျ ၉ လ လောကျ ဒုက်ခခံရပါတယျ။ ပွီးတော့မှ ကလေးလေးက လောကထဲကို ရောကျလာတာပါ။ ဒီကိစ်စကွီးမှာ အမြိုးသားတှကေတော့ အမြိုးသမီးတှထေကျ အပွတျအသကျကို သာလှနျနတောပါ။
အလွန်တရာကြွယ်ဝသူတွေရဲ့ ပြန်မထွက်ချင်စရာ သန့်စင်ခန်းအလန်းကြီးတွေ
ငွေကြေးပြည့်စုံကြွယ်ဝသူတွေအတွက်တော့ သန့်စင်ခန်းတွေဟာလည်း စိတ်လက်ကြည်သာစရာ ခမ်းခမ်းနားနားတည်ဆောက်ထားတဲ့ နေရာတွေပါပဲ။ သူတို့ရဲ့သန့်စင်ခန်းတွေကို ဝင်ပြီးရင် ပြန်မထွက်ချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ လူချမ်းသာတို့ရဲ့ သန့်စင်ခန်းအလန်းကြီးတွေကို ဖော်ပြပေးပါရစေ။
၁. ဒီသန့်စင်ခန်းကတော့ အိမ်တစ်လုံးစာလောက်ကို ရှိပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ သန့်စင်ခန်းသုံး ပစ္စည်းတွေအပြင် အလှစိုက်သစ်ပင်၊ ပန်းချီကားနဲ့ ပိုစတာတွေ၊ အကောင်းစားကော်ဇောတွေနဲ့ ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်အလား ခမ်းနားသပ်ရပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုကို မြင်ရမှာပါ။
၂. သူ့ရဲ့ အလှဆင်ထားချက်ကလည်း ဧည့်ခန်းထဲရောက်နေသလား ထင်ရအောင်ပါပဲ။ ရေချိုးသန့်စင်မယ့် နေရာကို အတက်မှာ လုံးဝန်းတဲ့ ကျောက်ခဲလေးတွေ ချထားပေးပုံကလည်း အပန်းဖြေဥယျာဉ်ထဲမှာ လမ်းလျှောက်ရမလို ထင်ချင်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းလင်းကျယ်ဝန်းပြီး အပေါ်က မီးဆိုင်းကလည်း ထူးခြားတဲ့ အသွင်ပါပဲ။
၃. အောက်ခြေကို မမြင်နိုင်လောက်အောင် ဖောက်ထွင်းထားတဲ့ ကျွင်းကြီးအပေါ်တည့်တည့်မှာ ကိစ္စရှင်းရတာ ရိုလာကိုစတာ စီးရသလို နေမှာပဲ တွေးမိလောက်ပါတယ်။ အိမ်သာရဲ့အောက်တည့်တည့်မှာ သူများနဲ့မတူတဲ့ ရသကို ပေးနိုင်ဖို့ ငွေဘယ်လောက်တောင် လွှင့်ပစ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိမှာပါ။
၄. ဒီအခန်းရဲ့ထူးခြားချက်က ရေသုတ်ပုဝါကို ယူရမယ့်လမ်းက နည်းနည်းဝေးနေတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အဖိုးကြီးလှတဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ရေစက်တွေက စိုရွှဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေပန်းဘေးမှာ လိုက်ကာနဲ့ မှန် တစ်ခုခုနဲ့လည်း မကာထားတာကြောင့် ဒီလိုတမင်ဖြစ်အောင် လုပ်ယူထားတာလို့ ယူဆရတယ်။ ရေချိုးရင် ပတ်ပတ်လည်မှာလည်း ရေစက်တွေ ပြန့်ကျဲစိုစွတ်နေတာကို ကြိုက်တတ်တဲ့ သူဌေးတစ်ယောက်လို့ ထင်ရပါတယ်။
၅. ဗီရိုအကောင်းစားတစ်လုံးနဲ့ စားပွဲတစ်ခုတောင် ထည့်ထားရလောက်အောင် အဆမတန်ကျယ်ဝန်းနေတဲ့ သန့်စင်ခန်းပါ။ အရာအားလုံးဟာ မြင်ရုံနဲ့ဈေးကြီးမယ်မှန်း သိသာနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေသာ သုံးစွဲထားတာကြောင့် ရေနံသူဌေးတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို့တောင် ထင်ချင်စရာဖြစ်ပါတယ်။
၆. လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တစ်မျိုးဆိုသလိုပါပဲ။ ဒီရေချိုးခန်းကတော့ သမာရိုးကျ ရေပန်းတွေကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘဲ၊ ဟောလိဝုဒ်ကားတွေထဲမှာ မိုးရွာသလို မျက်နှာကျက်အပေါ်ကနေ ဖြန်းချပေးမယ့် ရေပန်းတွေကို မြင်ရမှာပါ။ တကယ့်ကို အားကျစရာ ဆင်ယင်မှုတစ်ခုပါပဲ။
ပိုက်ဆံတွေ ထားစရာမရှိအောင် ရှိလာတဲ့အချိန်ကျရင် သူတို့လိုမျိုး စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ အိမ်တစ်လုံးလောက် ကျယ်ဝန်းတဲ့ သန့်စင်ခန်းတွေကို အလှဆင်ဖို့ စဉ်းစားဖူးရဲ့လား။
ငှကွေေးပွညျ့စုံကွှယျဝသူတှအေတှကျတော့ သနျ့စငျခနျးတှဟောလညျး စိတျလကျကွညျသာစရာ ခမျးခမျးနားနားတညျဆောကျထားတဲ့ နရောတှပေါပဲ။ သူတို့ရဲ့သနျ့စငျခနျးတှကေို ဝငျပွီးရငျ ပွနျမထှကျခငျြလောကျအောငျ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ လူခမျြးသာတို့ရဲ့ သနျ့စငျခနျးအလနျးကွီးတှကေို ဖျောပွပေးပါရစေ။
၁. ဒီသနျ့စငျခနျးကတော့ အိမျတဈလုံးစာလောကျကို ရှိပါတယျ။ လိုအပျတဲ့ သနျ့စငျခနျးသုံး ပစ်စညျးတှအေပွငျ အလှစိုကျသဈပငျ၊ ပနျးခြီကားနဲ့ ပိုစတာတှေ၊ အကောငျးစားကျောဇောတှနေဲ့ ကွယျငါးပှငျ့ ဟိုတယျအလား ခမျးနားသပျရပျတဲ့ ပွငျဆငျမှုကို မွငျရမှာပါ။
၂. သူ့ရဲ့ အလှဆငျထားခကျြကလညျး ဧညျ့ခနျးထဲရောကျနသေလား ထငျရအောငျပါပဲ။ ရခြေိုးသနျ့စငျမယျ့ နရောကို အတကျမှာ လုံးဝနျးတဲ့ ကြောကျခဲလေးတှေ ခထြားပေးပုံကလညျး အပနျးဖွဥေယြာဉျထဲမှာ လမျးလြှောကျရမလို ထငျခငျြစရာဖွဈပါတယျ။ ရှငျးလငျးကယျြဝနျးပွီး အပျေါက မီးဆိုငျးကလညျး ထူးခွားတဲ့ အသှငျပါပဲ။
၃. အောကျခွကေို မမွငျနိုငျလောကျအောငျ ဖောကျထှငျးထားတဲ့ ကြှငျးကွီးအပျေါတညျ့တညျ့မှာ ကိစ်စရှငျးရတာ ရိုလာကိုစတာ စီးရသလို နမှောပဲ တှေးမိလောကျပါတယျ။ အိမျသာရဲ့အောကျတညျ့တညျ့မှာ သူမြားနဲ့မတူတဲ့ ရသကို ပေးနိုငျဖို့ ငှဘေယျလောကျတောငျ လှငျ့ပဈလိုကျရတယျဆိုတာ ပိုငျရှငျကိုယျတိုငျပဲ သိမှာပါ။
၄. ဒီအခနျးရဲ့ထူးခွားခကျြက ရသေုတျပုဝါကို ယူရမယျ့လမျးက နညျးနညျးဝေးနတောပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ အဖိုးကွီးလှတဲ့ ကွမျးပွငျပျေါမှာ ရစေကျတှကေ စိုရှဲနမှောဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ရပေနျးဘေးမှာ လိုကျကာနဲ့ မှနျ တဈခုခုနဲ့လညျး မကာထားတာကွောငျ့ ဒီလိုတမငျဖွဈအောငျ လုပျယူထားတာလို့ ယူဆရတယျ။ ရခြေိုးရငျ ပတျပတျလညျမှာလညျး ရစေကျတှေ ပွနျ့ကြဲစိုစှတျနတောကို ကွိုကျတတျတဲ့ သူဌေးတဈယောကျလို့ ထငျရပါတယျ။
၅. ဗီရိုအကောငျးစားတဈလုံးနဲ့ စားပှဲတဈခုတောငျ ထညျ့ထားရလောကျအောငျ အဆမတနျကယျြဝနျးနတေဲ့ သနျ့စငျခနျးပါ။ အရာအားလုံးဟာ မွငျရုံနဲ့ဈေးကွီးမယျမှနျး သိသာနတေဲ့ ပစ်စညျးတှသော သုံးစှဲထားတာကွောငျ့ ရနေံသူဌေးတှရေဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုတဈခုလို့တောငျ ထငျခငျြစရာဖွဈပါတယျ။
၆. လူတဈကိုယျအကွိုကျတဈမြိုးဆိုသလိုပါပဲ။ ဒီရခြေိုးခနျးကတော့ သမာရိုးကြ ရပေနျးတှကေို တှရေ့မှာ မဟုတျဘဲ၊ ဟောလိဝုဒျကားတှထေဲမှာ မိုးရှာသလို မကျြနှာကကျြအပျေါကနေ ဖွနျးခပြေးမယျ့ ရပေနျးတှကေို မွငျရမှာပါ။ တကယျ့ကို အားကစြရာ ဆငျယငျမှုတဈခုပါပဲ။
ပိုကျဆံတှေ ထားစရာမရှိအောငျ ရှိလာတဲ့အခြိနျကရြငျ သူတို့လိုမြိုး စိတျကူးကောငျးကောငျးနဲ့ အိမျတဈလုံးလောကျ ကယျြဝနျးတဲ့ သနျ့စငျခနျးတှကေို အလှဆငျဖို့ စဉျးစားဖူးရဲ့လား။